Golaha Amniga oo ka Hadlay Xaaladda Kismaayo
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa war saxaafadeed ka soo saarey xaaladda amni ee sii xumaaneysa ee ka jirta gobollada Jubbooyinka ee Koonfuurta Somalia, gaar ahaan magaalada Kismaayo oo dhowaan dagaalo culus ay ka dhaceen.
Golaha ayaa war saxaafadeedkan soo saarey markii ay warbixinku saabsan gobollada Jubbooyinka ka dhageystey Kaaliyaha Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Mr. Zerihoun. Xubnaha ka tirsan Golaha Amaanka ayaa ka dalbadey dhammaan qeybaha ay khuseyso xasaradda ka jirta gobolladan inay ka fogaadaan talaabo kasta oo khatar gelin karta nabadgelyada iyo xasiloonida degaannadan, isla markaana ay la shaqeeyaan Dowladda Federalka Somalia si xal nabadeed loogu helo xasarrada iminka ka aloosan Jubbooyinka, hoosna loogu dhigi lahaa xaaladaha cakiran ee dhinaca gargaarka aadamiga.
Golaha amaanka waxay kaloo warbixintooda ku xuseen taageerada ay u hayaan horumarka dowladda federal ah oo wax ku ool ah oo si buuxda uga hawlgaleysa dalka oo dhan iyadoo la raacayo dastuurka KMG ee jira, iyadoo la dhowrayo qaranimada iyo xuduudaha dhulka Somalia, si taasi ay sal ugu noqoto nidaam wax ku ool ah oo iskaashi buuxda iyo is aaminaad ay ku dhexmarto dowladda Federalka iyo maamulada gobollada. War saxaafadeedka Golaha Ammaanka ayaa waxaa kaloo uu ku baaqey hanaan loo wada dhan yahay oo ku aadan dib u eegista dastuurka dalka.